59 qof ayaa dhimatay, inka badan 1000na waa la la'yahay daadad masiibo ayaa saameeyay Jarmalka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jarmalka Jebinta Wararka » 59 qof ayaa dhimatay, inka badan 1000na waa la la'yahay daadad masiibo ayaa saameeyay Jarmalka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Maalmo roobab mahiigaan ah ay ka dhasheen ayaa daadad weyni ka dhaceen galbeedka Jarmalka toddobaadkan.
30 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen gobolka North Rhine-Westphalia.
29 qof ayaa lagu dilay Rhineland-Palatinate.
Qiyaastii 1,300 oo qof ayaa wali lagu la’yahay daadadkii Jarmalka.
Ugu yaraan 59 qof ayaa ku dhimatay in ka badan 1,000 qofna waa lagu la'yahay Jarmalka sababo la xiriira daadad masiibo ah oo ku habsaday galbeedka dalka.
Maalmo roobab mahiigaan ah ayaa fatahaad weyn ka sameeyay galbeedka Jarmalka toddobaadkan, iyada oo tirada dhimashadu ay kor u dhaafayso 59 maanta.
Markii askarta booliska, askarta iyo shaqaalaha kale ee samafalku ay wadeen gurmad ballaaran, 30 qof ayaa lagu soo warramey inay ku dhinteen gobolka Waqooyiga Rhine-Westphalia, halka 29 kale oo dhibanayaal ah laga helay Rhineland-Palatinate.
Qiyaastii 1,300 oo qof ayaa wali la la'yahay, iyada oo in ka badan 1,000 sarkaal oo booliis ah, dab-demiyeyaasha, askarta iyo shaqaalaha kale ee gurmadka musiibada ay ka dhex baarayaan burburka Rhineland-Palatinate iyo North Rhine-Westphalia - oo ah labada gobol ee ugu daran - iyo sidoo kale deriska Baden-Wurttemberg . Toban diyaaradood oo kuwa qumaatiga u kaca ah ayaa la geeyay intii lagu jiray dadaalka samatabbixinta, iyadoo seddex kale oo dheeri ah lagu xiray winches-ka fiilooyinka loo diyaariyey si loo sii wado baaritaanka habeenka oo dhan.
Masuuliyiinta Jarmalka ayaa sidoo kale wali ku howlan soo celinta gaaska, korontada iyo biyaha meelaha ay dhibaatadu saameysey, halka Hay'ada Federalka Jarmalka ee Gargaarka Farsamada (THW) ay diyaarinayso inay ka dhisto goobo ku meel gaar ah daaweynta biyaha meelaha qaar.
Ka dib roobab mahiigaan ah, biyo xireenka Steinbachtalsperre ee u dhow magaalada Euskirchen ee Waqooyiga Rhine-Westphalia wuxuu halis ugu jiraa inuu baneeyo. Mas'uuliyiinta maxalliga ah ayaa uga digay qoraal ay soo dhigeen Facebook in "guuldarro lama filaan ah… ay tahay in la fisho waqti kasta," inkasta oo ay jiraan dadaallo lagu doonayo in qaabku u taagnaado. Ugu yaraan lix guri ayaa sidoo kale dumay, iyadoo 25 kale ay qatar ugu jiraan inay dhacaan.
Hogaamiyaha Jarmalka, Angela Merkel, oo booqasho ku joogta Mareykanka kulan ay la yeelaneyso Madaxweyne Joe Biden, ayaa sheegtay in daadadka ay ahaayeen “musiibo,” iyadoo intaa ku dartay in gargaar loo hayo dadka ay waxyeellada soo gaartay.
"Fikirradaydu way kula jirtaa, waadna ku kalsoonaan kartaa in dhammaan xoogagga dowladdeenna - federaalka, gobolka iyo bulshada - si wada jir ah ay u qaban doonaan wax walba oo lagu jiro xaaladaha ugu adag si loo badbaadiyo nolosha, loo yareeyo khataraha loona yareeyo dhibaatada," ayay tiri Merkel.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sidoo kale u tacsiyeeyay dadkii ku waxyeeloobay, isagoo yiri "waa musiibo, qalbiyadeenuna waxay la jirtaa qoysaskii ay ka baxeen kuwii ay jeclaayeen."
Jarmalku ma ahayn ummada kaliya ee cimilada xumaatay. Daadad ayaa sidoo kale ku dhuftay Belgium, Luxembourg iyo Netherlands. Sagaal ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay Beljim, sida ay sheegtay wakaalada wararka Belga, halka maamulka Holland ay ku booriyeen kumanaan dadka deegaanka ah inay ka cararaan goobaha u nugul daadadka.
Norway oo soo afjartay dhammaan xayiraadihii COVID-19, kuna laabatay ...